Koryn Caare “Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin waa in Maxkamad lasoo taago” | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Koryn Caare “Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin waa in Maxkamad lasoo taago”
Jun 11, 2019 - 16 Aragtiyood
Qardho ( Kalshaale ) Kornayl Saciid Cawil Jaamac [ Caare ] oo shir jaraad ku qabtay Magaalada Qardho ee fadhiga jabhada uu hogaamiyo ayaa ka hadlay dhawr arimood oo kala duwan, ugu horayn Caare jawaab adag ka bixiyay war kasoo baxay gudoomiyaha Gobolka Sanaag Tiimbaro kaas oo ahaa in Caare uu dhoofayo, Caare wuxuu sheegay in dalka uusan meelna uga socon.
Oo Gaashaantii Somaliland ayuu xiranyahey oo uu waliba ku joogaa Qardho, waxaan moodey inuu xirtey Gaashaanta xidigta blue dhexda kaga taalo
Waa in loo diro Ciidamada ALPHA GROUP
Generalka maxaa kornayl loogu dheegaa, mise xidigta sadexaad asagaa ku darsaday..
Caare waa xanaaqsan yahay general dresskii SNA, Somali National Army soo xirtay…
Isku booteeya laakiin no dagaal.
Maryooley nabad haloo daayo.
Caaroow hawshii laguu dirayba kamaad soo bixine maxaanu muuse & kaahin maxkamad cadaalad saarnaa.
Adigu hawshii labadaa nin eed sheegtay kuu xilsaareen inaad kasoo baxdo weeyee markaabanu iyagana la tiigsan doonaa maxkamada ICC ee caalaamka!!
Kkkkk kkkkkk kkkkk kkkkk
Qardholand com kkkkkkkkkkk
Waa in ladalacsiiya ninkan wareerland .com hhhh
ISAAQO waxeey soo cusbonaysiiyeen jabhadii SNM. Kii xanaaqaba jabhad lee furaan.
Waa Dawlad la’aanta.
Ilaa inta dawlad Somaliyeed oo hufan la helayo sidaa ayaa la ahaan doonaa,waliba dagaaladu way ka sii xumaan doonaan sidii hore – saa muddo ayaa lagu jiray Reer hebelnimo,tiibaa laysku khaayimay.
Waxaa burburaya Reer Hbelnimadii isku duubnayd ee Somali lagu dumiyay.
Xagee looga gudbayaa ayaa meesha taala.
Ma qabiilka ayaa iscunaya mise Somalinimo ayaa loo gudbayaa?
Meel loo dhaqaaqaba meeshii qabiilka ahayd waa lagu dagaalmaya.
Xummadda qabiilku kululaa……
Marba marka ay hoos u degto ayay ka xummad kulushahay…..
Haddaa tiraahdo inaan qabyaaladda walaaqo ayaan rabaa, tan hoosana waa walaaqmaysaa…
Marka miyaysan wacnayn in qabyaaladda kor laga soo damiyo si tan hoose u danto…..
Hadda meel walba somaali jifiyihii heshiiska ku ahaa in dhinaca shishe la qabyaaladeeyo ayaa iyagii qabyaaladii ka dhexqaraxda….see loo damiyaa….waa in tay jifiyuhu beereen kor laga soo damiyaa si tooduna u danto….
Weli Somaali ma helin philosopher/cabqari qabyaalada somaali ka dhaadhiciya siday u waajigi lahaayeen….
Tolow qardho ma u hilib doontaa intaan dhar askari gashado.
Alla maxaan duuflahaan oo kale arkay oo ismooday waxaanuu ahayn. Bilo gudahood-na u shiiqay sidii baruur bacad la dhigay!
ecurity Council Extends Mandate of African Union Mission in Somalia.
ecurity = Security
Waar Carre sow kan Habar Jeclo soo xareeyay. Tolow Habar Awal Galmudug bay iska dhiibi doontaa,
Sidan haddii uu xaalka Hargaysa sii ahaado magaalada waxaa la wareegi doonaa dad aanan Soomaali ahayn,
Waar Caarra waa in loo sheega inuusan magaalada Hargaysa dadka ka faarujin.
Wallee Iidoor godkiisa biyaa ugu galay